Somaliland: Madaxweyne Biixi Oo Baarlamaanka U Jeediyay Khudbad Si Weyn Loo Dhaliilay - #1Araweelo News Network
Somaliland: Madaxweyne Biixi Oo Baarlamaanka U Jeediyay Khudbad Si Weyn Loo Dhaliilay
Muxuu kaga Hadlay Madaxweynuhu Khudbadiisa?
“20,000 oo ah haween oo kala jooga 16 Magaalo waxa la gaadhsiiyey taageero dhaqaale oo gaadhaysa $640,000 Doollar. “Madaxweyne Bixii
“Siyaasaddu waa sida Ciyaarta Shaxdaoo kale, waxaan kula talinayaa Xisbiyadda iyo Ururrada siyaasadda in ay si nadiif ah boodhka faraha u wada geliyaan.”
Hargeysa(ANN)-“Xukuumad ahaan waxa naga go’an in aannu fulino waajib kasta oo naga saaran doorashooyinka sannadkan xilligoodii jooga, wixii caqabaad ah ee naga hor-yimaadana waxa lagu xallin doonaa sifo sharci ah iyo wada-tashiga Hay’adaha Qaranka.” sidaa waxa khudbadiisa ku yidhi, Madaxweynaha Jamhuuruyadda Somaliland Muuse Bixii Cabdi oo khudabadiisa dastuuriga ah u jeediyay isniintii fadhiga labada golle ee Baarlamaanka Somaliland.
“Doorashooyinku uma baahna bulaan iyo baalo-xoofto midna. Aflagaadadana laguma gaadho guul siyaasadeed. Hanjabaaduna maaha geesinimo.”
“Siyaasaddu uma baahna ballan-qaad been ah iyo hummaag siyaasadeed oo aan hubanti ahayn, micnaheeduna maaha guul siyaasadeed.“
Khudbada Madaxweynaha ayaa ahayd mid si weyn loo sugayay oo al saadaalinayay, balse khudabada Madaxweynaha lagu tilmaamaamay mid aan waxba ka duwanayn warbixinaha caadiga ah, isla markaana madashada fadhiga labada golle ayaa luumuujiyay munaasibad xafladeed oo sacab iyo heeso lagu asqeeyay, taas oo ah dhaqan cusub oo ka mid ah raadaadkii hantiwadaaga ee shuuciga iyo taliskii Millateri ee digtaytarkii Siyaad Barre kaga tegey Somaliland.
Inkasta oo Somaliland tahay qaran qaatay nidaamka dimuqraadiga, balse dhaqamada hantiwadaaga ee durbaanada ayaa ah kuwo ay madaxdu adeegsadto, kuwaas oo ay dad baddan u arkaan kuwo lagu qariyo guuldarooyinka Siyaasada.
Madaxweyne Biixi khudbadiisa oo aannay ka madhayn waxyaabo mala-awaal iyo faan loo arkayay, bakse taas bedelkeeda waxa ku jiray waxyaabo baddan oo Madaxweynuhu dul istaagay, kuwaas oo ay ugu mudan yihiin maaraynta suuqa waaheen iyo arrimo kale oo uu khudbadiisa ku sheegay.
Khubada Madaxweynaha oo dhammaytiran ayaa u dhignayd sidan” “l Sannadkii tagay ee 2021-ku waxa uu ahaa sannad adduunku la daala dhacay riiqda uu reebay Caabuqa Xanuunka Saf-marka ah ee Covid-19. Xanuunnada saf-marka ah ee noocan oo kale ah inta badan boqolkii sannaba hal mar bay soo maraan adduunka.
Waxa uu ahaa sannad colaadeedoo saanadda millatariga, qumaca iyo baaruudda la isu afaystay, oo nabadda adduunku gashay weedhaamo.
Balse Jamhuuriyadda Somaliland, waxa uu u ahaa sannad nabad-gelyo iyo sannad doorasho. Qabsoomidda doorashooyinkii isku-sidkanaa ee Golaha Wakiillada iyo Golayaasha Deegaankaiyo sidii ay innoogu qabsoomeen waxay muujiyeen bisaylka siyaasadeed ee shacabka Somaliland.
Sannadka cusub ee 2022-kuna ma waayo la’a. Waxa adduunkii u sii durkayaa dhinaca dagaallada, waxaana adduunkii hadheeyey saymo colaadeed oo khatartooda wata. Waxa durba adduunkii cidhiidhi ka gashay nabad-gelyada cuntadda (Food Security), Saliiddaiyo TamartaGaaska, waxaana shaki weyn leh in uu hakad galo isku-socodka dadka iyo badeecadaha adduunka.
Isku-xidhka aqoonyahanka iyo Maal-qabeenka;
Dhiirri-gelinta injaamacadaha dalkusameeyaan hal-abuur iyo daraasado wax-ka-tari kara xalka dhibaatooyinka inna horyaala.
Samaynta Kaydka Raashinkaintii awoodeena ah.
Labadii sanno ee la soo dhaafay, Caalamka waxa soo food-saartay hoos u dhac dhaqaale iyo wax-soo-saar, taasi oo uu sababay caabuqa COVID-19. Dhibaatadaasi dhaqaale ee Caalamka ka dhacday in kasta oo ay ina saamaysay haddana, waxa ay Somaliland, qayb ahaan, kaga bad-baaday siyaasadda Xukuumaddu u dhigtay, sida: casriyeynta iyo horumarinta hannaanka iyo kaabayaasha dakhli-ururinta, kor-u-qaadista Dakhliga Cashuuraha Berriga iyo hoos-u-dhigista ku tiirsanaanta Dakhliga Cashuuraha Kastamada, kalsoonida dadweynaha ee cashuur-bixinta, kobcinta dhaqaalaha, toosinta maamulka kharash-bixinta iyo daah-furnaanta isticmaalka miisaaniyadda Qaranka.
Waxa ay xukuumaddu dhaqan-gelisay Hab-raacyo Caalami ah oo xoojinaya La-dagaallanka Musuqmaasuqa iyo La-xisaabtanka Xatooyada Hantida Qaranka, kuwaas oo lagu hagayo Nidaamka Xisaabaadka Hay’adaha Dawladda iyo Maamulka maaliyadda.
WaxaMiisaaniyadda Qaranka sannadkii tagaylaga maal-geliyey98 Mashruuc.Mashaariicdaas ooku kacay qiime lacageed oo gaadhaya163.7 Bilyan oo SL.Shillin ah, una dhiganta 23.3 Milyan Doollar, waxaanay ka badan yihiin mashaariicdii sannadkii hore 3.11%, waxaana dhammaantood la mariyey Qandaraasyada Qaranka iyo Tartan daah-furan.
Waxa la oddorosayaa in Miisaaniyadda Sannadka 2022-ka laga maal-geliyo 122 mashruuc, oo qiimahoodu gaadhayo 293 Bilyan oo SL.Shillin ah, waxaanay lacag ahaan ka badan yihiin79% mashaariicdii sannadkii hore.
Deeqaha Dibedda aynu ka helno waxa ay dalka ka fuliyeen sannadkii tagay mashaariic horumarineed oo qiimahoodu dhan yahay 164.6 Bilyan oo SL.Shillin ah, una dhiganta 23.5 Milyan doollar.Mahad-celin kadib, Bulshada Caalamka waxaanu u sheegaynaa in Bulshada Somaliland ay tabayso taageero ama deeq macno leh oo u qalma milgaha iyo gobonnimada Shacabka Somaliland.
Waxa lagu kordhiyey Shaqaalaha Dawladda 13% sannadkii tagay, taas oo ka dhigaysa in afartii sanno ee la soo dhaafay la kordhiyey tirada Shaqaalaha Dawladda7,907 qof, una dhiganta in guud ahaan Shaqaalaha Dawladda la kordhiyey39%, kuwaas oo badankoodu ku shaqo-galay Barnaamijkaguulaystay ee Shaqo Qaran.
Qiimaha Shillinka Somaliland waxa lagu ilaaliyay 8,400 halkii Doollar ba, Sicir-bararkuna 3.5 %ayuu hoos ugu dhacay sannadkii tagay.Waana heerkii ugu hooseeyay ee muddooyinkii ugu dambeeyey oo dhan uu gaadho.
Waxa ay xukuumaddu hir-gelisay tallaabooyin qorshaysan oo suurtogeliyey in heerka sarrifka lacaguhu uu sugnaado muddadii ay Xukuuumaddani jirtay, taasina waxa ay dar-dar iyo kalsooni galisay dhaqaalaha, ganacsiga iyo maal-geshiga dalkeena.
Baanka Dhexe ee Jamhuuriyadda Somaliland waxa uu sidoo kale qaaday tallaabooyin taabanaya nolosha dadka, waxaanu sannadkii 2021-ka ku maal-geliyey lacag xaddigeedu ka badan yahay 13 Milyan oo doollaroo ah mashaariic u badan Kaabayaasha Dhaqaalaha oo ay wadaan qaar ka mid ah Hay’adaha Dawladda Dhexe iyo qaar ka mid ah Dawladaha Hoose ee dalka.
Waxa geba-gebo ku dhaw Dhismaha Dekedda Kalluumaysiga ee Maydh oo ay ku baxayso lacag gaadhaysa 5 Milyan oo Doollar.
Waxa 100% dhammaaday Wejigii Koowaad ee dhismaha Dekedda Berbera oo dhan 400 Mitir.
Waxa sidoo kale la dhagax-dhigay Wejiga Labaad ee dhismaha Dekedda Berbera oo dhan 600 Mitir oo cusub.
Dhismaha iyo casriyeynta Dekedda Berbera marka uu dhammaado, Dekedda Berbera waxa ay noqon doontaa mid ka mida dekedaha ugu dhererka badan Qaaradda Afrika, waxaanu dhererkeedu noqon doonaa 1,650 Mitir, gunta iyo Qotada Dekeddu waxa ay noqonaysaa 17 Mitir oo hoos ah, taas oo ka dhigaysa Dekedda labaad ee ugu gun-dheer Afrika, oo qaadi karta Maraakiibta ugu waaweyn adduunka, iyada oo rogi karta 2 Milyan oo Kontayner sannadkii, halka ay hadda ka rogi karto 500,000Kontayner.
Wiishashka waaweyn Dekedda Berbera waxa hadda ku xidhan Saddex Wiish oo waaweyn (Cranes), marka 600 Mitir ee cusub dhammaadaan, waxa lagu xidhi doonaa Dekedda 7 Wiish (7 Cranes) oo waaweyn, tirada Wiishashka waaweyna waxa la gaadhsiin doonaa 10 Wiish.
Waxalaga dhigay Madaarka Berbera, Madaar Caalami ah, oo u adeegi kara dhammaan badeecadaha iyo Shucuubta Dalalka aan Dekedaha lahayn ee Afrika, waxaanu ka mid yahay maanta goobaha adduunka loogu xiisaha badan yahay. Xukuumaddu waxay shacabka uga faa’iidaynaysaa goobta istraatejiga ah ee Eebbe innagu uumay, oo adduunka oo dhan xiisaynayo.
Waxa dhammaad ku dhawWaddada Burco – Ceerigaabo,waxaana hadhsan 10 KM oo keliya. Waxa dhammaaday 262 KMoo innoogu kacay qiime lacageed oo gaadhaya54,484,000 Doollar,dhammaan lacagtaana waxa laga bixiyey Miisaaniyadda Qaranka ee dalkeena.
Dhismaha Waddada Burco-Ceerigaabo waxay wax weyn ka beddelaysaaDhaqan-dhaqaalaha (Socioeconomic aspect), isku socodka bulshada iyo ganacsigaee dadkeena,tusaale ahaan: Magaaladda Burco ilaa Ceerigaabo waxa lagu gaadhi jiray 9 ilaa 10 Saacadood oo socod xidhiidh ah, haddase waxa lagu gaadhaa 5 saacadood. Noolka gaadiidku qofkiiba waxa uu ahaa ku dhawaad 60 – 80 Doollar, haddase waa 20 doollar oo keliya.
Waxa dhammaaday Dhismaha Wejiga Koowaad ee Waddada Berbera Corridor oo ah Hargeysa–Berbera,waxaana ku jira afar Biriish oo dadka iyo alaabooyinka iskaga goosha Berbera iyo dalka intiisa kale ay kala kulmi jireen dhibaatooyin waaweyn xilli-roobaadka.
Waxa dhawaan bilaabmay Dhismaha Aagga Ganacsi ee Cashuuraha ka-caagan (Free Zone), waxaana qorshaysan in la dhiso dhul gaadhaya54 Hector, oo loo qaybin doono Laba Weji. Wejiga Koowaad waxa la dhisi doonaa dhul gaadhaya 34 Hector, oo isugu jira Waddada isku Xidha Aaga Ganacsi ee Cashuuraha ka-caagan iyo Dalka intiisa kale, Dhismaha Xafiisyada Maamulka, Dhismaha Hangarada waaweyn ee loo diyaariyey Shirkadaha iyo Marinka Baadhista Kontayneriska. Waxa la filayaa in uu hoy u noqdo shirkado badan oo maxalli ah iyo kuwo caalami ahba, isla markaana uu shaqo u sameeyo in ka badan1,000 qof.
Waxa la bilaabay oo socda dhismaha carro-kaawadaWaddooyinka Oodweyne-Burco iyo Laascaanood-Kalabaydh, waxaanay ku dhammaan doonaan muddo kooban, Insha Alla.
Waxa haddadhammaaday sahaminta (Feasibility Study) Waddada isku xidha Lawyacaddo – Boorama, Waddadaas oo uu innaga Caawiyey Baanka Horumarinta Africa, waxaana loo bilaabi doonaa sida ugu dhakhsaha badan.
Waxa dhawaan la bilaabi doona dib-u-dhiska Waddada isku xidha Burco-Laalays oo ka kooban 82KM, waxa sidoo kale dhismaha waddada la socda dayac-tirka afar biriish oo ku yaala inta u dhaxaysa Burco iyo Laalays.
Waxa la billaabay sahaminta (Feasibility Study) waddada isku xidha Degmadda Maydh iyo Magaalada Ceerigaabo.
Dhinaca Waxbarashada, waxa sannadkii tagay la dhisay 57 Dugsi oo cusub, waxaana la dayac-tiray 24 dugsioo hore.
Waxa Deeq Waxbarasho oo dalka dibaddiisa ah loo diray 470 arday.
Waxaanu waajib ka dhignay in 10% ardaydaJaamacadaha Dawladda iyo 12% ardaydaJaamacadaha gaarka loo leeyahay ay helaan Deeq Waxbarasho, si loo kordhiyo helitaanka tacliinta sare.
Waxa xanuunno kala duwan laga tallaalay 654,330 Caruur ah iyo hooyooyin tiradoodu gaadhayso 108,600 hooyo.
Waxa xarumaha Caafimaadka ee Dawladdaadeegyo caafimaad loogu fidiyey1,530,000 qof, oo ka badan sannadkii hore 2%.
Waxa la qaaday Toddoba Olole oo ah Wacyi-gelinta iyo tallaal bixinta Xanuunka Caabuqa COVID-19, waxaana la tallaalay 557,723 qof, una dhiganta30% dadweynaha da’doodu ka weyn tahay 18 jir.
Waxa 2021-kii la dhisay 18 Goobo-caafimaad oo ay ku jiraan 5 Cisbitaal oo cusub, waxaana la dayactiray 23 xarumo-caafimaad.
Waxa la daweeyey3 Milyan oo Neef, waxa nafaqayn lasiiyey1.75 Milyan neef, waxa ka faa’iidaystay75,000xoolo dhaqato ah.
Waxa la dhisay Shaybaadhka Qaranka ee baadhista cuntada iyo dawooyinka oo ku kacay lacag gaadhaysa13,440,000,000 SL.Sh.
Waxa la qoday 41 Ceel dhaadeer oo cusub iyo 6 Ceel oogaagaaban oo cusub, waxaana la dayactiray 60 ceel oo dhaadheer.
Waxa la qoday20Ballay oo waaweyn oo ku kala yaal Gobollada dalka.
Waxa la aas-aasay Xarunta Barashada Dastuurka iyo Waddaniyada, waxaana ilaa hadda wax ka bartay 34,500 muwaadin.
Waxa la qaybiyey 50,000nuqul oo ah buugga Dastuurka JSL, si loo kor loogu qaado barashada sharciga ee muwaadiniinta.
Waxa horyaallada dalka ku tartamay 90 Kooxood,waxa ay ciyaareen 485 ciyaarood, waxa ciyaarahaasi saftay3,043Ciyaartoy,waxaana daawaday dad ka badan1,800,000 qof.
Dagaalka Ruushka iyo Ukraine maaha dagaal ku eeg labadooda oo keliya, balse waa dagaal ku salaysan mab’da iyo amni oo u dhaxeeya Gaashaan-buurta Nato iyo Ruushka ama si kale haddaan u dhigoaragtiyaha dhaqaale iyo siyaasadeed oo u dhexeeya dalalka Bariga iyo GalbeedkaAdduunka.
Waxase Alle mahaddii ah in Quwadaha hirdamayaaay arkeen maanta muhiimadda juquraafiyadeediyo istaraatijiyadeed ee Jamhuuriyadda Somaliland ku leedahay adduunka, taas oo sababtay in Quwadihii Dhaqaalaha adduunka ugu tunka weynaa ay doonayaan in ay maanta wax la qabtsadaan Somaliland, in kastoo ay in badan indhaha ka lalin jireen.
Xukuumadda aan odayga u ahaywaxa tiir-dhexaad u ah in cid kasta oo rabta in ay Somaliland wax la qabsato ay ugu soo hagaagto in aannu nahay Qaran madax-bannaan. Qaranka Somaliland waxa uu diyaar u yahay in uu cid kasta la yeesho iskaashi iyo wax-wada-qabsi ku dhisan Qaddarin, Caddaalad iyo sinnaan.
Dawladdu iyada oo dhiirri-gelinaysa geesinnimada iyo naf-hurista Ciidanka Qalabka-sida, waxa ay u kordhisay Ciidanka Qalabka-sida mushaharka30%.Waxa kale oo ayXukuumaddu kordhisay guud ahaan Miisaaniyadda Saanadda iyo Sahayda Ciidanka Qalabka-sida.
Amniga iyo Degenaanshaha Bulshada (Social Security)
Amniga iyo Degenaanshaha Bulshada waxa saldhig u ah in bulshadu wax wada yeelato, iskaashato, is-aaminto, quluubtooduna wada-jirto.Taa waxa lagu heli karaa in dabaqadaha dhaqaale ee dadkeenu aanay kala fogaan, si aan faraqa dhaqaale ee u dhaxeeyaa aanu u abuurin kala fogaansho bulsho, khilaaf iyo amni-darro.
Sidaas darteed, annaga oo ka duulayna mabaa’didaasi kor ku xusan iyo Dastuurka Jamhuuriyadda Somaliland, waxa aannuwaajibinay in Mashaariicda laga fuliyo dhaqaalaha ama Miisaaniyadda Qaranka ee ka badan 42,000,000 SL.Sh la mariyo Nidaamka Qandaraasyada Qaranka oo daah-furan, Muwaadiniinta Somalilandna ay u helaan fursado siman oo ay si caddaalad ah ugu tartami karaan. Waxa aan halkan mar kale ka caddaynayaa in Hay’adda Dawladeed ee ku dhaqmi wayda go’aankaas laga qaadi doono tallaabo ku habboon.
Waxa ay Xukuumaddu, markii ugu horraysay taariikhda Somaliland, sannadkii 2021-ka Kab-miisaaniyadeed u samaysay dhammaan Degmooyinka dalka oo ka kooban 101 (Boqol iyo Hal) degmo, xaddiga lacagta la siiyeyna waxa ay gaadhaysaa 106,946,632,435 SLSH (Boqol iyo Lix Bilyan, Sagaal Boqol Lix iyo Afar Milyan, Lix Boqol Laba iyo Soddon Kun, Afar Boqol iyo Shan iyo Soddon SL.SH).
Waxa Mashruuca Horumarinta Dawladaha Hoose ee JPLG la gaadhsiiyey Degmooyinka Ceerigaabo, Laascaanood iyo Caynaba. Haddana waxa socda qorshaha lagu darayo degmooyin hor leh.
Xukuumaddu, iyada oo tix-gelinaysa duruufaha dadkeena iyo qiimaha quutal-daruuriga ee kor uga sii kacaya adduunka, waxa ay cashuur-dhimis gaadhaya 10% ku samaysay quutal-daruuriga soo galaya dalka.
Waxa raashin ay ku noolaan karaan muddobil ah iyo taageero lacageed oo kooban loo fidiyey in ka badan 750,000 qoys oo kala jooga dhammaan Gobollada dalka.
Waxa sidoo kale 20,000oo ah haween oo kala jooga 16 Magaalo oo ku kala yaala Gobollada dalka la gaadhsiiyey taageero dhaqaale oo gaadhaysa $640,000 Doollar.
Waxa dalkeena soo food-saartay abaar ba’an oo saamayn ku yeelatay in ku dhaw 1.5 Milyan qof oo Reer Somaliland ah. Saamaynta ugu daran ee abaartu waxa ay ahayd biyo yaraan. Sidaa darteed, Xukuumadda oo kaashanaysa ganacsatada waaweyn ee dalkeenaayaa24,600 oo booyadood (Load) oo dhaansangaadhsiiyey gobolladii ay ugu darnayd biyo yaraanta ay abaartu keentay. 72%booyadahaas waxa bixiyey Xukuumadda iyo Shacabka Somaliland oo iskaashanaya, halka Hay’addaha gar-gaarku ka bixiyeen 28%.
Xukuumaddu iyada oo niyadda ku haysa in laga gaashaanto abaaraha soo noq-noqda iyo saamaynta ay yeeshaan mar walba, waxa ay sannadka 2022-ka ka qodaysaa Gobollada ay ugu daran tahay saamaynta abaartu 30 Dhaam oo cusub, waxaana dayac-tir lagu samaynayaa 20 dhaam oo hore.
Waxaan halkan mahad-naq iyo bogaadin uga gudbinayaa bahda garsoorka oo Qaranka u haya hawl weyn oo culayskeeda leh.
4. Dhibaatadii Dabka Suuqa Waaheen
Waxa ku gubtay Suuqa Waaheen ku dhawaad 3,673 Ganacsioo kala duwan, waxaana lagu waayey dhammaan hantidii iyo dhaqaalihii hoos yaalay Meheradahaasi ganacsi.
Dadkeenu waa dadkaa shaqada iyo xoogsiga sharafta u yaqaana, oo aan gacmaha hoorsan, oomaalintay ugu daran tahay aan dacasha laalaadin, ee luqunta kor u taaga. Waa Qab iyo Han iyo Kalsooni aynu dheernahay dadyow badan.
Waxa aannu magacawnayGuddi Heer Qaran ah oo hagta hoggaaminta dib-uga-soo-kabashada Khasaaraha Dabkii Waaheen. Guddidaasina waxa ay sii dhistay Guddi-hoosaadyo ka kala socda Suuqii Waaheen, Ganacsatada, Culimada iyo Qurbaha, ilaa haddana si wacan ayay hawshoodu u socotaa.
Waxa la diyaariyey Afar Suuq oo ku Meel-gaadh ah oo kala ah: Beerta Xoriyadda, Hadh-wanaag, Laynka Booliska iyo Injida.Waxa la gaadhsiin doonaa suuqyada ku-meel gaadhka ah ilaa Toddoba suuq.
Waxa ilaa hadda la ururiyey Qaadhaan lacageed oo gaadhaya $23,000,000 (Saddex iyo Labaatan Milyan oo Doollar).
Waxa ilaa hadda Qaadhaan lacageed ka soo gaadhay Guddida Dalalka Jamhuuriyadda Djibouti, Taiwan, Somalia iyo Baanka Adduunka, lacagtaas oo ka mid ah lacagta aan kor ku xusay.
Shaxda 1aad: Dakhliga iyo Kharashka ilaa hadda la helay ama la galay
Dhakhli $23,000,000 Tiradda Dadka wax la siiyey
Kharash $73 – 5,000 Waxa la siiyey 100% hantidoodii 988 qof
$5,001 – 40,000 Waxa la siiyey 25% hantidii ka baxday. 1,016 qof
$40,001 -100,000 Waxa la siiyey 15% hantidii ka baxday
$100,001 – 480,000 Waxa la siiyey 10% hantidii ka baxday
Wadarta Dadka cawil-celin lacageed loo sameeyey ilaa hadda: 2,004 Ganacsade
Wadarta Lacagta la bixiyey ilaa hadda $8,638,418
Waxa Gobonnimada iyo dun-wanaagga dadkeena ka mid ah Ganacsadaha inta uu Guddida u yimi yidhi,”Hantida aan lahaa ee iga Gubatay waa hanti u dhiganta $73 oo keliya, hal Doollarna ha iigu darina haddii wax la ii helayo, haddii kale Illaahii awalba i siiyey waa nool yahay”. Waa baarka iyo halka ugu sarraysa xalaal-miiradnimada dadkeena.
Dawladda Hoose ee Hargeysa oo kaashanaysa Guddida Heer Qaran ee Dib-u-soo-kabashada Suuqa Waaheen, waxa ay nadiifiyeen Suuqii gubtay, waxaanay ka qaadeen 1,879 Lawdh oo qashin iyo iskaraab ah.
Hawsha ugu badan ee Qaran ahaan innoo hadhay waa dib u dhiska Suuqa Waaheen, iyada oo la raacayo hab-raacyo caalami ah oo sugaya bad-qabka hantida iyo nafaha shacabkeena. Insha Alla, waxa aan rajaynayaa in innaga oo gacmaha is haysana aan dib u dhisano Suuqii Waaheen ee innaga gubtay mid ka qurux badan, ka bad-qab badan, kana rajo wacan. Suuqaasi oo noqon doona suuq ku dhismay Quluub iyo Shacab wada-jira, astaanna u ah midnimo, walaalnimo iyo hal-adayg ummadeed.
Waxaan halka uga soo jeedinayaa ammaan iyo bogaadin ballaadhan dhammaan dadkii waxyeeladdu ka soo gaadhay dabkii Suuqa Waaheen, waxaanan uga mahad-celinayaa sida wanaagsan ee ay u samir-qaateen iyo iimaankooda adag iyo waliba sida xil-kasnimada leh ee ay ula shaqeeyeen Guddiyadii hawshaaloo xil-saaray.
Waxa kale oo aan u mahad-celinayaa cid kasta oo dhibaatadaasi soo gaadhay ummaddeena ka damqatay, garab na siisay oo noo soo gurmatay. Waxaan si gaar ah ugu mahad-celinayaa dalalka aynu jaarka nahay sida, Dawlad Deegaanka Soomaalida iyo shacabkooda oo gurmadkii ugu horeeyey na soo gaadhsiiyey isla habeenkiiba iyo Dawladda Dhexe ee Itoobiya.
Sidoo kale waxaan u mahad-celinayaa Dawladda iyo Shacabka Jamhuuriyadda Djibouti, oo aan maalin qudha naga qoob-qaadin. Waxa kale oo Djibouti soo gaadhsiisay Guddida Gurmadka iyo Dib-u-soo-kabashada Suuqa Waaheen lacag ka badan 1.5 Milyan Doollar, ilaa haddana wali way wadaan kaalmo ururintii dadkeena. Waxa kale oo aan u mahad-celinayaa Dawladda Soomaaliya iyo shacabkeeda iyo guud ahaan shacabka kale ee Soomaalida ah oo meel ay joogaanba ka gil-gishay dhibaatada soo gaadhay dadkeena. Waxa aan sidoo kale u mahad-celinayaa Baanka Adduunka oo gaystay gurmadkii ugu horeeyey ee Hay’adi bixiso.
Waxaan leeyahay waanu idiin ogsoonnahay abaalkaa weyn ee yimid xilligii loo baahnaa.
Waxa aynu ka baranay in aan wax dhisan karno, waxna qabsan karno, dhib kasta oo inna soo gaadha.
Waxaaynu ka baranay in la xoojiyo, gacanna lagu siiyo shaqadooda Ciidanka Dab-demiska oo muujiyey karti iyo awood ay ku dheehan tahay waddaniyad.
Waxa aynu ka baranay in la furo jidadka iyo waddooyinka dhex-mara suuqyada, si gurmadku u gaadhi karo bar-tilmaameedkiisa.
Waxa aynu ka baranay in guryaha ganacsi ee la dhisayo loo sameeyo nidaamka bad-qabka guryaha. Waxaanan farayaa Dawlaha Hoose iyo Wasaaradda Hawlaha Guud, Dhulka iyo Guriyeynta in ay diyaariyaan hab-raacyada iyo hagayaasha bad-qabka dhismayaasha dadweynaha.
Sannadkii hore, waxaan Golaha Baarlamaanka hor tagay iyada oo ay doorashadoodii Golaha Wakiilladda ka hadhsan tahay 83 maalmood oo keliya,saxal-qaaddii fooraha doorashaduna ay ka dhacayso dhammaan dacallada Gobollada Somaliland.
Xubnihii Golaha Wakiillada ee hore, waxa ay ahaayeen rag waayo-arag ah, muddo dheer oo gaadhaysa 15 sanno iyo ka badanna u soo shaqeeyey Qaranka. Waxaan ku idhi, ‘Duco Qaata, oo si wanaagsan uga amba-baxa Golaha, Doorashooyinka isku-sidkana, wixii idinku xidhan nagala shaqeeya.’ Waa ay aqbaleen, waanay ka soo baxeen ballankaas. Maantana waxa Illaahay Mahaddii ah in Doorashooyinkii Isku-sidkanaa innooqabsoomeen oo Caalamka oo dhan majeertay.Waxa kale oo Bulshada Somaliland ay mar kale fursad u heshay in ay doortaan Xildhibaannadii matali lahaa shanta sanno ee soo socda, una badan rag dhallinyaro ah, walow aan ka xumahay in Golaha Wakiillada haweenkii u tartamay aan midna ku soo bixin.
Sidoo kale, waxaan soo dhawaynayaa Gollaha Wakiillada iyo Gollayaasha Deegaanka ee cusub ee la soo doortay. Waxaanan kula dar-daarmayaa ballankeenu waa shaqo iyo in si wada-jir ah loogu adeego dadka iyo dalka.
In Xisbiyada Qaranka oo ah hilinka ay Muwaadiniintu u maraan xaqiijinta hankooda siyaasadeed ay noqdaan kuwo ku dhisan sharci, oo aan marna muddo dhaaf noqon,dhexdoodana ay ka muuqato dimuqraadiyad dhab ah oo ku dhisan mabaa’di iyo siyaasad cad oo qeexaysa qorshaha ay dalka ku horumarin karaan.
Siyaasaddu waa sida Ciyaarta Shaxdaoo kale. Sidaa darteed, waxaan kula talinayaa Xisbiyadda iyo Ururrada siyaasadda in ay si nadiif ah boodhka faraha u wada geliyaan.
Runtii Dawladda, Golayaasha, Ganacsatada iyo Shacabka Maraykan waxa ay noo soo dhaweeyeen si aad iyo aad u qiimo badan, oo muujinaysa in fahanka Maraynkan ee Somaliland uu aad isku beddelay.Waxa aannu la kulanay ilaa 13 Xildhibaan oo ka tirsan labada Gole Baarlamaan ee dalka Maraykanka.
In Dawladda Maraykanku ay dib-u-qiimeyn ku samayso Deeqaha Maraykanku siiyo Somaliland iyo qaabka ay Deeqahaasi u soo gaadhaan dalkeena intaba.
In la diyaariyey, isla markaana la gudbiyey Mooshinka Xeerka Ishaashiga Somaliland iyo Maraykanka“Somaliland Partnership Act”, kaas oo ka dalbanaya in Wasaaradda Arrimaha Dibedda ee Maraykanka oo kaashanaysa Wasaaradda Gaashaan-dhigga in ay soo dar-saan qaabka ugu habboon ee Somaliland iyo Maraykanku Iskaashi u yeelan karaan mustaqbalka.
Boqortooyada Ingiriiska (UK)
Sidaa darteed, Xukuumad ahaan waxaanu go’aansanay in aannu xoojino dhaq-dhaqaaqa iyo galaan-galka Siyaasadda Arrimaha Dibedda Somaliland ee kuwaajahan UK.
Xidhiidhka Somaliland iyo Dalka Isku-taga Imaaraadka Carabta ee aynu walaalaha nahay waa uu sii xoogaystay, waxaanay Dalka ka furteen Xafiis Diblomaasiyadeed, taasi oo sahashay isku-socodka dadka iyo ganacsiga ka dhexeeya labada dal. Waxaan rajaynayaa in ganacsiga labada dal uu gaadho malaayiin doollar sannadkii. Waa dawladda keliya ee dalkan ku samaysay maal-geshidhaqaale oo muddo dheer ahoo gaadhaya boqollaal milyan oo doollar. Dawladda Imaaraadka Carabtu waa Dawlad mar walba innala garab taagan taageero iyo gurmad xaalad kasta oo aynu soo marnay, hadday tahay abaarihii, Duufaantii SAGAR iyo Dabka Suuqa Waaheen ee maanta.
Waa in dhibaatada soo food-saarta dalkeenu noqotaa waayo-aragnimoinnoo jeexda jidka horumarka iyo midnimada.
Hiraalka Horumarinta Somaliland ee 2030 (Somaliland Vision 2030),waxa uu qeexayaa in dalkeenu noqoto dal “Dimuqraadi ah oo sharci lagu dhaqmo, nabad-gelyo iyo barwaaqo ah, dadkiisuna ku nool yihiin hodan-tinimo loo dhan yahay iyo in ay noqoto iftiinka aqoonta iyo ilbaxnimada ee ka dhex-muuqda Afrika”.
Qorshaha Xukuumadda ee la xidhiidha Siyaasadda Bad-baadada Bulshada (Civic Protection Policy) ee lagaga hortagayo masiibooyinka dabiici ah iyo kuwa dad-sameega ah sida:(Dagaallo, dhul-gariir, dab, weerar cadow, IWM).